Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitrapo Feon’ny Filazantsara (FF) (Martsa 2017)
Noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2017, Atoa Daniel Talen’ny FF sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia nihaona tao amin’ny Foibe FF ny Sabotsy 4 Martsa 2017 lasa t
Fihaonan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “volontaire” FF (Sept 2016)
Fampahafantarana ny Tale vaovaon’ny Feon’ny Filazantsara
Ny 17 Septambra 2016 dia nihaona teto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo rehetra “volontaires” eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Fotoana izay nahampahafantarana azy ireo ny Talen
Seminera Fampiofanana «Fampitaovana ny olona masina”
Anjaran’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” ny Fampiofanana farany (2015/2016)
Namarana ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha enina ho an’ny Taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015/May 2016) ny Feon’ny Filazantsara (FF), ny Sabotsy 07 May 2015 lasa teo. Tao amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana Bel A
Fihaonan’ny Mpiara-miasa antsitrapo
Ny Sabotsy 23 Janoary 2016 no nanatanteraka ny fiarahabàna nahatratrarana ny taona vaovao 2016 ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” avy amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Zava-dehibe ny fihaonana toy izao satria dia fotoana natao indrindra hitondràna am-bavaka ny taona vaovao sy ny asa Fitoriana ifandrombon
- Misy Fitsipika anatiny izay hifanarahan'ny roa tonta. (Ny FF sy ny Volontaire izany)
- Hisy fifampidinihana mialoha eo amin'ny roa tonta, na amin'ny alalan'ny fihaonanana mivantana na an-taratasy.
- Hisy Karatra fanamarinana omena ny ''Volontaires''
Fisokajiana ny asa
Sehatr'asa azon'ny ''Volontaire'' iandraiketana amin'izao ao anatina fiaraha-miasa an-tsitrapo. Ireto izany:
- Fampianarana Soratra Masina an-Taratasy Ifandraisana (FSMI)
- Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra (Film-débat)
- Kristiana mpandray ny Fanasan'ny Tompo
- Olona resy lahatra fa tokony hotohanana ny asa Fitoriana ny Filazantsara.
- Manolo-tena hiasa an-tsitrapo (tsy mandray karama),
- Manatanteraka ny andraikitra izay hifanarahany amin'ny FF.
- Miasa amin'ny fotoana mampahalalaka azy sy mety aminy.
Ny FF dia maniry indrindra ny hiara-miasa amin'ny olona vonona hanome tànana azy isan-toerana amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay iandraiketany. Mpiara-miasa an-tsitrapo na ''Volontaires'' no iantsoana azy ireo. Toy izao manaraka izao ny mikasika izany:
Ianao no mpitsidika faha 48506